Mvura isina mvura musasa musana Vagadziri & Suppliers - China Mvura isina mvura musasa bhegi rekare Fekitari
Chitupa & Test Report
Vadivelu Comedy Technology Patent
Diki Yakapfava Inotonhorera Bag
Middle Soft Cooler
Big Soft Cooler Backpack
Yakakura Kuvhura Reservoir Bladder
Diki Rinovhurika Mvura Dundira
Shower Mvura Bag
Mvura Isingapindi Bag & Backpack
Kubata Hove & Bhokisi reTool
Plain Fishing Lure Bhokisi
Kudhinda Hove Tackle Bhokisi
Sports Bhodhoro reMvura
Waterproof camping bag
Bhegi risina mvura uye bhegi
Duku rakapfava rinotonhorera bhegi
Pakati nyoro inotonhorera
Hombe nyoro inotonhorera musana
Dundira guru rekuvhura reservoir
Dundira remvura rinovhura diki
Plain hove rure box
Kudhinda bhokisi rekubata hove
Bhodhoro remvura yemitambo
Yakapfava Inotonhorera Kunze Kwekukwira Kembi
Camping Ice Inotonhorera Mvura
Inotakurika Ice Inotonhorera TPU Kunze
Waterproof Backpack Inotonhorera Bag
Backpack Mvura Yekunze
Inokodzera mabhegi ekufamba kunze, pikiniki, kukwira makomo, kukwira makumbo uye chikepe.Iyo 1680D-TPU yepamusoro-yemhando isingapindi mvura uye yepamusoro-ye-iyo-yemutsara-yakasimba zipper inoita kuti ive yakakodzera yekufamba kunze.Iyo 30-litre yakakura inotakura zvinhu zvese zvaunoda.Inogona kutoyangarara pamusoro pemvura uye kuva bhurawuti rako rehupenyu panguva dzakaoma.
Backpack Waterproof Travel
Outdoor sports travel bag, 1680D-TPU zvinhu, high-quality air-tight zipper, 30 litres capacity.Dhizaini yakaoma yemuviri webhegi haina mvura, haipfeki, uye inogara.Yakakodzera kukwira makomo, kufamba, kufamba, kusimba uye zvimwe zviitiko.
Yepamusoro-mhando PVC yekunze isina mvura musana.Huru hwema 40 litres.Ergonomic inotakura system uye yakakwana yekunze yakarembera system.Yakanyatsokodzera kushandiswa kukwira makomo.Iyo kambani inogona zvakare kupa akagadziridzwa masevhisi kugadzirisa yako yakasarudzika maitiro.
Kushambira Fitness Kudzidzira Wet Dry Backpack PVC
Bhegi rakanaka rakanyorova uye rakaoma harisi rekushambira chete.Iyo ine fashoni yebhuruu uye dema dhizaini yemavara, yakachena uye yakatsvinda vhezheni.Kungave kushambira, kusimba, yoga, kana kufamba, isarudzo yakanaka kwazvo.PVC zvinhu, 30 litres yakakura kugona.Sarudzo yakanakisa yekunyorova uye yakaoma Backpacks.
Mvura isingapindi mvura musana wakaoma
Bhegi rekunze risina mvura rakaoma rinofunga nezve kutaridzika uye kuita.Pakati pehuwandu hwemarita makumi maviri neshanu, usanetseka nezvekuremedza.Kushandisa high-density PVC jira, inoshanda zvakanyanya kusapinda mvura.Inogona kurarama nemhoteredzo dzakanyorova dzakadai semahombekombe, nzizi, kana mvura.Homwe dzomumativi dzinogona kudzivirira zvinhu.Kushandisa sainzi kunyura uye kudzikisa mutoro system inobvumidza iwe kufamba zviri nyore.
Outdoor mitambo isina mvura bag
Bhegi rebhegi rakaremerwa risina mvura, jira gobvu risingapfeki, rinoramba kubvarura, haripindi mvura, rinokwanisa kutakura, uye riri nyore kuvhura.Iine zvese zviri nyore kushandisa uye kunyaradza, zvichikutendera kuti udzoke zviri nyore uye zvakachengeteka pese paunoshanya nekufamba.
A multifunctional panze isina mvura musana.Kushandisa yakakwirira-inoshanda TPU zvinhu, isingapindi mvura uye isingapfeke.Basa rakasimba risina mvura, rakakodzera kukwira gomo, kufamba, kukwira chikepe uye mamwe mabasa ekunze.
Mauto Camouflage Waterproof Backpack
Yepamusoro-mhando 900D-TPU isingapindi mvura, 20L huwandu, bhegi rekunze risina mvura rine mauto-mhando yekuvharisa dhizaini.Ichava mubatsiri wako mukuru muhondo.
Kunze Kwemvura Yekufamba Backpack
Iyo yekunze yekufamba isingapindi mvura musana ine huwandu hwe40L yakaoma uye isingapfeki, haisi nyore kukuvadza, uye iri nyore kunotora.Ndiyo sarudzo yako yakanakisa yekufamba, kukwira nekufamba.
TPU yekunze isina mvura musana
Iyi bhegi inogadzirwa nenylon, TPU, uye PVC yakasanganiswa zvinhu.Muviri mukuru wakagadzirwa neisina mvura TPU zvinhu.Kune homwe kunze kwebhegi yekuisa zvimwe zvinhu zvidiki, huwandu hwese hwakakura uye chimiro chakazara.Kuvhurwa kwebhegi kunotora roll-up dhizaini, uye saizi inogona kugadziriswa zvakasununguka.Flexible kushandisa.
12Next >>> Peji 1/2
Sibo Bags & Suitcases Fitings Co., Ltd. JinJiang